Mararaa Guddinaa: Ibsa Ministira Haajaa Alaa Yunaayitd Isteets kaa’n – Kichuu
HomeAfaan OromooMararaa Guddinaa: Ibsa Ministira Haajaa Alaa Yunaayitd Isteets kaa’n
Ibsa guyyaa haraa Ministira Haajaa Alaa Yunaayitd Isteets irratti gaafiiwan kaa’n keessa hidhamuun dura ta’aa Kongresii Federalawaa Oromoo , Dr. Mararaa Guddinaa tokko ture.
(facebook) –Ibsa guyyaa haraa Ministira Haajaa Alaa Yunaayitd Isteets irratti gaafiiwan kaa’n keessa hidhamuun dura ta’aa Kongresii Federalawaa Oromoo , Dr. Mararaa Guddinaa tokko ture.
Bakka bu’aan dhaabichaas oduu hidhamuu Dr. Mararaa quba hoo qabaate gafatammee, dhagauu isaa erga ibsee booda, “ oduun kun bayyee nu yaaddese jira,” jedhee,
“dhuguma taanaan, kun sagalee walabaa ukkamsuu Itoophiyaa keessa jiraachuu fakkeenya dabalataatis”, jedhee jira.
Itti dabaludhaniis, “ijjannoo keenya han duraan ibsinee, isa mootummaan Itoophiya labsii atattamaa han labse sagalee mormitootaa ukkamsuu fi mirga heera biyyatti molquudhuf mala malate jenne jabeessa,” jedhan.
Gochi kun waasaa mootummaan Itoophiyaa siyaasa biyyaatii keessatti hirmaanaa dhabillee ilallchaa addaa addaa qabanii foyyesuudhaa seeneen waliin wal-fallessa. Kana waan ta’eef, dhimma kana jala buunee hordofnas jedhe.
Dr. Mararaa Guddinaa Mana-hidhaa Ma’ikelaawii Keessa Akka Jiran Dhaga’uu Isaa Dubbata Paartiin Isaanii.
WASHINGTON, DC (VOAfaanoromo)— Dura-taa’aan Koongiresa Federaalawa Oromoo fi miseensi hooggana gamtaa Medrek, Dr. Mararaa Guddinaa, walga’ii Gamtaan Awurooppaa waametti hirmaachuuf Awurooppaa bubbulanii Kaleessa akka mana isaaniitti deebi’anitti firoota isaanii lama waliin qabamanii hidhamamuun isaanii beekamee jira.
Itti-aanaa dura-taa’aa Koongiresa Federaalawa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti, Dr. Mararaan mana-hidhaa Waaltaa Qorannaa Yakkaa, ka “Maa’ikelaawii” jedhamuun beekamu keessatti akka hidhamanii jiran beekamee jira. Maatiin isaanii nyaata geessanii, waardiyoonni harkaa fuudhan iyyuu, Dr. Mararaa wajjiin akka wal hin agarsiisiin dubbatan – Obbo Mulaatuun.
Dr. Mararaa Guddinaa hidhamuu ka dubbate, Mootummaan Itiyoophiyaa, qajeelfama labsii yeroo hatattamaa keessatti tumame cabsuu isaaniitiif qabaman, jedha.
Gareen mirga dhala-namaa, Amnestii Internaashinaal, hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa kana ilaalchisuun ibsa baaseen, tarkaafii akkaan hamaa fi gaddisiisaa, jechuun balaaleffate.
Oduu fi qophii IMALAA. Dhimma hoogganaa Qeerroo Bilisummaa